Humidifier, Air Purifier, Electric Kettle - Kennede
Isu tinobatsira nyika kukura kubva 2000
Kuburikidza neanopfuura makore makumi maviri ebudiriro, KENNEDE ine zviri pachena zvemakwikwi zvakanakira.
KENNEDE ine mabhenefiti akasimba ehunyanzvi uye anopfuura 860 patents, kusanganisira anopfuura zana patents akanyoreswa kune dzimwe nyika.
KENNEDE timu yekushambadzira ine vanopfuura makumi mana vatengesi. Vese vanosimbirira pamusimboti wekusimudzira we "CHII CHEKUTENGESA & NEKUTENGA SEI", ita hutsva uye kupa akatanhamara uye akatendeseka masevhisi evatengi.
Mune ramangwana, KENNEDE icharamba ichitarisira kumisa kuvimbana uye hukama hwekubatana kwenguva refu nevatengi vepasirese, uye ramba uchiedza kuve mugadziri ane hunyanzvi uye anokwikwidza.
HEPA Mhepo Yekuchenesa Mhepo Yekuchenesa mhando yemunhu
Rechargeable fan kubva kuKennede
Pedestal fan, Fani Inotenderera, Electric Fan, A...
KENNEDE 360 LED Camping Lantern yekushandisa Kunze
Mini fan ine Battery kubva kuKennede
Hunhu ndiyo hwaro hwekupona kwebhizinesi uye kusimukira, chiratidzo chekutonga kwemhando: kugutsikana kwevatengi kwakanyanya, mutengo wakaderera wemhando. Mune ramangwana, kambani ichagadzira akateedzana matanho ekuvandudza anoenderana nezvinangwa zviviri izvi, kuvandudza ruzivo rwemhando uye hunyanzvi hwevashandi vese, kupa rutsigiro rwakasimba rwekuvandudzwa kwemhando yekambani, uye kugadzira ramangwana rekuhwina.
Fekitori yedu yakura kuita Premier ISO 9001uye BSCI yakasimbiswa mugadziri weYakakwira mhando, Inodhura-Inoshanda.
Kennede inogara muJIangmen Guta, mudunhu reGuangdong, inofukidza nzvimbo ye220000 square metres,. isu takagadzira kubva ku2000, fekitori yehunyanzvi yezvinhu Zvingadzoserwa uye zvinhu zvemumba. OEM uye ODM inogamuchirwa.
Mist Humidifier yekushandisa kumba uye wega
LED Desk Mwenje neHusiku Mwenje yekushandisa kumba
Kutonhorera-Kubata Stainless Simbi Yemagetsi Kettle
Electric Kettle Temperature Kudzora Girazi Tea K...
Kana uchida maindasitiri mhinduro ... We are available for you
Isu tinopa zvigadziriso zvitsva zvekufambira mberi kwakasimba. Chikwata chedu chehunyanzvi chinoshanda kuti chiwedzere kugadzirwa uye mutengo unoshanda pamusika
Neanopfuura makore makumi maviri ebudiriro, KENNEDE ine yakasimba tekinoroji mabhenefiti uye anopfuura 860 patents, kusanganisira anopfuura zana patents akanyoreswa kune dzimwe nyika.
Kuburitswa kweChigadzirwa Chitsva - Rechargeable ...
Chinese LED indasitiri kubudirira | gold Wr...
In | kuhwina goridhe Wright "huwandu hwemhando ...